Dhakhtar Covid-19 ka daaweeyay boqolaal oo laga helay fayruskan faafa
Howlwadeenkan caafimaad oo caan ka ah telefishinada iyo baraha bulshadda ayaa talooyin siin-jiray dadweynaha.
RIYADH, Saudi Arabia – Dhakhtar Sacuudiyaan ah oo Covid-19 ka daaweeyay 513 bukaan ayaa aakhiritaankii uu soo ritay cudurka, sidda ay Talaadada maanta ah warisay warbaahinta maxaliga ah ee waddankaas.
Nezar Bahabri, oo ku xeeldheer xanuunada faafa iyo lataliye dhanka xakameynta infakshanka, ayaa lagu waramay in isbitaal la dhigay ka gedaal markii muddo shan maalmood ah uu dareemayey qando baaxad leh.
"Caafimaadkeyga wuu wanaagsan yahay, balse heer-kulka jirkeyga isma dhimin shantii maalmood ee lasoo dhaafay, waxaana hadda la iigu daaweynayaan Isbitaalka," ayuu u sheegay war-fidiyeenka gudaha.
Howlwadeenkan caafimaad ayaa caan ka ah telefishinada iyo baraha bulshadda, isagoo siin-jiray dadweynaha taloooyin la xiriira Covid-19.
Mas'uuliyiin ka tirsan boqortooyadda iyo dad shacab ah ayaa hawada u mariyey fariimo ay soo kabasho deg-deg ah ugu rajeynayaan.
Sacuudi Carabiya ayaa wuxuu diiwaan-geliyey 268,934 kiisas oo ah fayruska, illaa iyo hadda. Waana dalka ugu badan gobolka Khaliijka.
Iyaddoo kororka uu maalinle yahay isla markaana bogsashada ay tahay 83 boqolkiiba, dhimashadda ayaa waxay gaartay 2,760, hase ahaatee, mar walba waxaa suurtagal ah in xanuunka ay u dhintaan dadyow kale.
Booliska oo toogtay dad ka carooday qof loo xiray in uusan waddan af-xir
Afrika 27.06.2020. 11:25
Ciidamadda ayaa maalmihii lasoo dhaafay wajahayey dhaliilo la xiriira dhaqan-gelinta xayiraadaha Covid19.
Covid-19 oo kusii fidaya Somaliland xilli uu duulimaad kusii jeedo Hargeysa
Somaliland 11.06.2020. 13:45
Dowladda Soomaaliya oo diiwaan-gelisay kiisas horleh oo ah Covid-19
Soomaliya 27.05.2020. 17:30
Kiisaska Covid-19 ee dalka oo kor-u-dhaafay 1,300, dad horleh oo dhintay
Soomaliya 16.05.2020. 17:00
Somaliland oo xuska 26-ka June iyo 1-da May u baajisay Covid-19 awadiis
Somaliland 03.05.2020. 12:25
Kiisaska Covid-19 ee Jabuuti oo qarka u saaran in ay gaaraan kun
Afrika 22.04.2020. 18:40